Jean-Baptiste Colbert, waxa uu ahaa siyaasi Faransiis ah. Waxa uu noqday Wasiirka Maaliyadda ee Faransiiska laga soo billaabo 1665 ilaa 1683 xilligii Boqor Louis. Waxa uu ka mid ahaa fekeraaga Dugsiga dhaqaalaha ee Mercantilism-ka. Colbert waxa uu ka shaqeeyay sidii loo abuuri lahaa dheelitirnaanta ganacsiga iyo dib-u-habaynta suuqa. Waxa uu ka shaqeeyay horumarinta dhaqaalaha gudaha […]
Wuxuu ku dhashay magaalada Madurai, ee ka tirsan gobolka la yiraahdo Tamil Nadu, ee ay dagaan Hindida madow ee la yiraahdo Tamil. Waxaa dhalay qoys dhaqaale ahaan meel dhexaad ah, Aaabihiis wuxuu u shaqeyn jiray warshad koronto, oo kutaal magaalada Jenaay, ee caasimadda gobolka Tamil Nadu. Carruurnimdiisii telefishan kartoon kama daawan, safarna baabur raaxo kuma […]